Puntland maku biiri doontaa AMISOM-Land? - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Puntland ayaa todobaadkan sheegtay inay kasoo horjeedo go’aankii kasoo baxay Dowlada Federaalka Soomaaliya ee lagu sheegay qaabka dhismaha Golayaasha Baarlamaanka Federaalka ee lasoo dooran doono dhamaadka sanadkan 2016.
inqilaab20121Dowlada Federaalka ayaa la kuftay dhamaan hawlihii laga sugayey inay kasoo baxdo sababta ugu weyn ayaa ahayd in maamulkii Dowlada Federaalka uu gacanta u galay koox kooban oo uu Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud kamid ahaa, kuwaasi oo loo yaqaan Damul-jadiid isla markaana horey uga tirsanaan jiray xisbi diimeedka Al-Islaax.
Khilaafyada ka dhex jiray dowlada Federaalka oo sabab u ahaayeen Damul-jadiid oo dooneysay in codka beelaha koonfurta degan ay guud ahaan la wareegaan iyo waliba Maamul gobaleedyada. [Halkan ka akhriso Maqaalkii horey aan uga qornay INQILAABKA DAMUL JADIID]
Fadeexada_bangiga-Dhexe1Waxaa xasuusin weyn muddan Fadeexadii Bangiga dhexe oo ay kashiftay Guddoomiyhii bangiga ee xilka iska casishay Yusur Abraar oo la oron karo waa muwaadinad Qaranka Soomaaliya ka mudan bilad sharaf, kadib markii ay horjoogsatay boobkii ugu weynaa oo ay Damul-jadiid doonayeen inay kula wareegaan hantida Qaranka Soomaaliya ee ku xaniban Bangiyada Caalamka. [Halkan ka akhriso Fadeexadii Bangiga Dhexe iyo qaabkii ay u dhacday].
Shirkadaha Turkida ee hada maamula illaha dhaqaalaha ee Muqdisho ayaa hada diiday inay wax xisaab celin ah u sameeyaan dowlada.
UNSOM signXafiiska UNSOS (United Nations Support Office in Somalia) oo shaqadiisu tahay gargaarka Somaliya ee Qaramada Midoobay ayaa bishii November 2015 soo bandhigay waxqabadkood iyo kharashka uga baxa Soomaaliya.
Waxaa intaa dheer shaqaalaha xafiisyada AMISOM oo dhan 12,000 oo ka kala yimid Yuganda, Burundi, Jabuti, Etoobia, Nayjeria iyo Siiraliyoon. Kuwaanoo shaqadoodu ku jirto ciidamada Unpolice ee illaaliya xarumaha Qaramada Midoobay iyo tababarada ay bixiyaan.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sanadkii 2014 dhamaadkiisii ku tilmaamay dalalka Soomaaliya iyo Yemen, guulaha ay ka gaareen siyaasada arrimaha dibada iyo dhismaha dowlado dimuquraadi ah. [Halka ka akhriso].
Wadada 3aad ee Puntland iyo shacabkeeda u furan ayaa ah in ay ISKU-Tashadaan isla markaana ka dhex baxaan siyaasada cakiran ee Muqdisho, isla markaana ku dhawaaqaan inay iskood isku maamulayaan inta laga helayo Dowlad Soomaaliyeed oo matasha shacabka Soomaaliya iyo Himilooyinka ummada Soomaaliyeed.